महिलाको सौन्दर्य बढाउन यस्तो सम्म गरिन्छ, थाहा पाउँदा तपाईलाई छक्क पर्नुहुनेछ ! - Like For Nepal
सोल । संसारभरका महिला या पुरुष आफ्नो सुन्दरता बढाउनको सबैखाले उपायहरू प्रयोग गर्छन् । के तपाईलाई थाहा छ सुन्दरता बढाउनको लागि एउटा अनौठो उपचार प्रचलित छ । जहाँ थ’प्प’ड हा’ने’र मानिसको सौन्दर्य बढाइन्छ । यसलाई स्लेप थेरापी भनिन्छ । यो दक्षिण कोरियामा धेरै लोकप्रिय छ ।
दक्षिण कोरियाका महिलाहरूले सयौं वर्षदेखि स्लेप थेरापी गर्दै आएका छन् । यसमा महिलाहरूले आफ्नो सौन्दर्य बढाउनका लागि हरेक दिन आफ्नो गालामा ५० थ’प्प’ड ल’गा’उँछन् । यो थेरापीले छालाको सौन्दर्य बढाउने विश्वास गरिन्छ । जसले गर्दा महिलाहरु धेरै सुन्दर हुन्छन् ।
स्लेप थेरापीको अर्थ कसैलाई दुख्ने गरी थ’प्प’ड हा’न्ने भन्ने होइन । यो धेरै सहज तरिकाले र हल्का हातले गा’लामा थ’प्प’ड लगाइन्छ । महिलाहरूले यो उपचार आफ्नै हातले पनि गर्न सक्छन् । तपाँईले थेरापी गर्दा दुबै गालाहरुलाई आफ्नो हातले ह’ल्का’सँग पि”ट्नु प र्छ ।
दक्षिण कोरियामा यो थेरापी प्राचिनकालदेखि नै प्रचलनमा रहे पनि बिस्तारै यो थेरापी विश्वभर फैलिरहेको छ । यस थेरापीको माध्यमबाट गालामा ह’ल्का थ’प्प’ड ल’गा’उँदा अनुहारको प्रत्येक भागमा रगतको प्रवाह बढ्छ भन्ने दक्षिण कोरियाका मानिसहरूको विश्वास छ ।
यसले छाला सफा गर्न मद्दत गर्छ । थ’प्प’डको कारण अनुहारमा ताजा र’ग’त ब’ग्छ । जसले गर्दा अनुहारमा चमक आउँछ । तपाईलाई यो थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ कि दक्षिण कोरियाका महिलाहरू हरेक दिन यो थेरापी गर्ने गर्छन् ।
कोरियन महिलाहरूले बाल्यकालदेखि नै यो थेरापी गर्दे आएकाले उनीहरुको उमेर बढ्दै गएपनि छालाको चमक भने कायमै रहन्छ । महिलाबाहेक दक्षिण अफ्रिकाका पुरुषहरूले पनि यो थेरापी गर्ने गर्छन् । यो थेरापीलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सके छालालाई लामो समयसम्म जवान राख्न सकिन्छ भन्ने कोरियालीहरुको विश्वास छ । यसै कारण यसलाई ‘एन्टी एजिङ थेरापी’ पनि भनिन्छ ।
Prevजन्मीएको ७ दिनमै बुवा बितेर टुहुरो भएका भिम रावलको यस्तो छ भावुक कहानी !
Nextनेपालमा फेरी लकडाउन हुदै, भर्खरै आयो यस्तो खबर